How To Create A New Local User Account In Windows 10 – Somali Virtual Academy
Markaad ku duubtid kumbuyuutarkaada Windows 10, waxaa si default ah kuugu sameysan akoon “account” leh “administrative previlages”, kaasoo kuu suura galinaya inaad computer-kaada aad ku duubtid ama aad ku install gareysid software kasta ee aad dooneysid iyo waliba wax kastoo u baahan “Administrative Previlages”.
Maxaan uga baahanahay inaan user cusub aan sameysto?
Malaayiin ka mid ah dadka isticmaala Windows Operating System-ka ma sameystaan account cusub oo waxay iska isticmaalaan kii caadiga ahaa ee markay window-ga ay ku duubayeen u sameysmay, taasoo ka dhigeysa inuusan amniga computer-ka uusan sugneyn, ayna mudan tahay in laga tago caadadaas.
Inaad abuurato account cusub (si aadan login ugu sameyn adigoo isticmaalaya “Administrative Account”), ama aad u abuurto account cusub caruurtaada (si aad u xadido awooda ay u yeelan karaan iney wax walba ay ku duubaan computer-ka) waxay kordhineysaa security-ga machine-kaada ama computer-kaada.
Iminka aan isla fiirino hanaanka la maro markii la rabo in account cusub lagu daro computer ku duuban Windows 10.
Talaabada ugu horeysa ee aad qaadeyso waxay tahay inaad kiciso Accounts Menu, si aad u kiciso waxaad u baahan tahay inaad click ku dhahdo Start Menu – Search Box-ka ku yaala ee aad ku qorto “Add User”. Ka dooro “Add, edit, or remove other users” jawaabaha kuusoo baxayo taasoo badanaa ah qodobka ama jawaabta ugu horeeysa ee kuu soo baxeysa sida kaaga muuqata sawirka.Sidoo kale waxaad sameyn kartaa inaad tagto Start Menu -> Settings -> Accounts, kadib aad ka doorato “Family & other users” kaasoo ku keenaya isla sawirkaan kuu muuqata.
Waxaad click ku dhahdaa “Add someone else to this PC” kaasoo ku geenaya page uu ku jiro foom kaa codsanaya inaad ku qorto email address-ka aad login kaga sameyn lahayd Microsoft-ga. Iska ilow bokiska yar ee kaa codsanaya inaad geliso email-ka ama talefoonka, badalkeed waxaad click ku dhahdaa link-ga hoos ku qoran ee farta baluuga ku qoran kaasoo dhahaya “The person I want to add doesn’t have an email address”.
Foomka kuu muuqanaya wuxuu kaa codsanayaa inaad geliso email address iyo magacaada si aad Microsoft account u hesho, lakin ogow casharkeena maanta waxaan ku baraneynaa sida loo abuuro account cusub adigoon email address aadan gelin.Waxaad iska ilowdaa foomka kuu muuqanaya adigoo badalkeed aadaya linkiga hoos ku qoran ee dhahaya “Add a user without a Microsoft account” click ku dheh, waxaa kuusoo muuqanaya foom sidaan u eg.
Buuxi foomka oo la bax akoonka cusub magacaad rabto iyo password kuu gaar ah, tusaale ahaan si aan casharka u fahamno aniga waxaan la bixi doonaa magaca akoonkeyga cusub “SOMVA”, ka dibna waxaan click ku dhihi doonaa button-ka ay ku qoran tahay “Next”.Ka dib markaad button-ka Next-ga ay ku qoran aad click ku dhahdo waxaa kuu muuqanaya page-kii aan horey usoo aragnay, laakiin toogadan wuxuu kii hore kaga gedisan yahay waxaad ku arki kartaa qeybta hoose ee Other Users-ka intaan la gaarin link-ga ugu dambeeya ee dhahaya “Set up assigned access” magaca akoonka aad soo sameysay ama aad soo abuurtay.
1 responses on "How To Create A New Local User Account In Windows 10"
Mr WordPress9/May/2016 at 10:25 amLog in to Reply
Sida la isku diiwaan geliyoTutorials
Sideen Koorso u qaadan karaa?Tutorials
How To Create A New Local User Account In Windows 10Tutorials
Designing Website Templates with Artisteer 4.2Web Design
Building a Lottery System with Microsoft Visual Basic .NETProgramming Languages,Software Development
Learn Adobe Photoshop From ScratchGraphic Design
Building a Content Management System with Dreamweaver CS6, PHP & MySQLWeb Development
Learn ASP.NET Web Forms with C# from ScratchMicrosoft Product,Programming Languages,Web Development